Aatcc Crockmeter, Aatcc Ku Dhaqidda Makiinada Midabka, Abrasion iyo Kiniiniga Mashiinka - TST
Taxanaha Hantida Jirka
kor u qaadista tijaabada qalabka guryaha
Mashiinka Qalabka Alwaax
Boorsooyinka iyo tijaabada kiiska
TST waxay soo aruurisay qaabeynta softiweer, mashiin, farsamo, cadaadis saliid, cadaadis uumi, elektaroonig, matoor, iyo cilmi baaris iyo horumar, hubinta tayada, maareynta wax soo saarka, tijaabinta iyo kuwa kale ee xirfadaha xirfadeed leh si ay u helaan macluumaadka waqtiga-dhabta ah. Qalabka TST (Shiinaha) Co., Ltd waxay aasaastay Maarso, 2006, taasoo ah shirkad caalami ah oo ku takhasustay soo saarista mashiinka tijaabada iyo qalabaynta otomaatiga.
14 sano oo waayo aragnimo ah
In ka badan 100 alaab
Qor xalka qalabka tijaabada shaybaarka isla markaana isku dar wax soo saarka, qaabeynta iyo cilmi baarista iyo horumarka
Boorsooyinka iyo Suitcases tester
arag wax soo saarka
Maaskaro Qaybta Maskaxda ah ...
Adeegsiga: Barxadda tijaabada shaandhaynta PM wuxuu ku habboon yahay tijaabinta hufnaanta 45% -99.9% qalabka shaandheynta fasalka. Qalabka filterka waxaa la tijaabiyaa si waafaqsan heerarka caalamiga ah. Qaab-dhismeedka naqshadeynta guud ee kursiga keydka tijaabada waa isku dhafnaan iyo iftiin, iyo inta lagu gudajiro tijaabada, waxaa kaliya loo baahan yahay in la bixiyo awood ku habboon oo dheeraad ah iyo hawo isku buuqsan (biyo la'aan, saliid la'aan), oo ku habboon in loo isticmaalo sheybaarada, warshadaha iyo kuwa kale munaasabadaha. Imtixaanka shaandhada shaandhada, ...
Nabadgelyada dhalaalaya ...
Baadhitaanka Cadaadiska Santuuqa ...
Isweydaarsiga Wejiga Tooska ah ...
Waraaqda ISO535 iyo ...
Kaydinta Kiimikada Dryin ...
Adeegga Marka hore
Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha alaabta guryaha ee Shiinaha ayaa horumar aad u weyn sameeyay.
Sanadihii la soo dhaafay, warshadaha alaabta guryaha ee Shiinaha ayaa horumar aad u weyn sameeyay. In kasta oo horumarka degdegga ah ee alaabta guriga lagu sameeyo, tayada wax soo saarku sidoo kale waa arin aan la dafiri karin. Sidaa darteed, soo-saareyaasha alaabta guryaha badanaa waxay doortaan qalabka tijaabada qalabka guryaha sidii xirfad ay iyagu leeyihiin ...
Wadada Donghai CJ-23, Donghaibincheng, Beerta warshadaha, Quanzhou, Shiinaha
Alaabada kulul - Khariidadda Goobta - Mobileka AMP